Lehiben'ny Mpanolotsaina monisipaly Antalya Metropolitan, nilaza fa mikasa ny hanao monorail eo an-kianjan'i Liman sy Antalyaspor izy ireo. Cem Oguz, "Raha mahita ny loharanom-baovao avy amin'ny kianja mankany Kundu eo amin'ny 16 kilometatra amin'ny làlan-dàlan-dàlana isika dia misy fizarana" [More ...]
Monorail, izay nokasaina hatao eo anelanelan'ny tobin-tsoratry ny tanànan'i Gaziemir ESBAŞ sy Gaziemir New Fairground (Fair İzmir) tamin'ny taona 2016 voalohany tao İzmir teo ambany fiadidian'ny Aziz Kocaoğlu, nifanakalo hevitra tamin'ny filoha vaovao Tunç Soyer. [More ...]
10 New Metro Line izay hatsangana any Istanbul Izay distrika dia hamirapiratra kintana any amin'ny trano fonenana: Ny tsipika metro 10 lehibe indrindra, izay manakaiky ny asany ao Istanbul, dia manamora ny fitaterana toerana maro avy any Bakırköy ka hatrany Çekmeköy, Kağıthane ka Zeytinburnu. [More ...]
University University of Geology Canakkale Onsekiz (COMU). Dr. Doğan Perinçek dia nanintona ny saina tamin'ny tetik'asa narosony ho an'ny tanàna tamin'ny haino aman-jery sosialy. Anarany ao amin'ny media sosialy [More ...]
Lalamby lalamby any Eurasia Rail, rafi-pitaterana hazavana, fotodrafitrasa ary Logistic mendrika 10-12 dia miomana hampiantrano ny anarana malaza eo amin'ny sehatry ny gara manerantany ao Izmir amin'ny aprily 2019. Iray amin'ireo faritra Eurasianina ary betsaka indrindra eto an-tany [More ...]
Fitsarana tariby Ankara 11, Chambre Architects Sampana Ankara ao amin'ny lapa Ankara manohitra ny fanapotehana ny foiben'ny fitaterana fitaterana amin'ity tranga ity, dia nanapa-kevitra ny hanajanona ny famonoana. Efitry ny arsitekin'ny sampana Ankara: "Ny toerana azon'ny fitsarana dia afaka miditra [More ...]
Ny solombavambahoakan'ny CHP Ankara, Nihat Yeşil, izay nilaza fa Havaray dia rafitra rafi-pitaterana lafo vidy kokoa noho ny Metro, dia miahiahy momba ny zotra fitateram-bahoaka ary indrindra ny karazana fitaterana monorail izay mety hiarahana amin'ny Metro. [More ...]
Ny kaominin'i Ankara Metropolitan dia hanome sakafo haingana raha haingana amin'ny Metro sy Ankaray mandritra ny volana Ramadany ho an'ireo mpitsidika sy mpitsidika avy any ivelan'ny tanàna. [More ...]
Misy fahasamihafana eo amin'ny "fitaterana" sy ny "fitaterana .. Ankara Solombavambahoaka Nihat Yeşil; Tsy misy famaritana na hevitra momba ny drafitry ny fitaterana drafitra ao amin'ny Lalànan'ny fampandrosoana. Ny ministeran'ny fitaterana dia manana fahefana amin'ny drafitry ny master amin'ny tanànantsika; Metropolitan [More ...]
Ny Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Istanbul Mevlüt Uysal dia nanome vaovao tamin'ny mpikambana an-gazety tamin'ny alalàn'ny fandinihana ilay tetikasa izay hampiasaina ho zaridainan'ny 5 arivo metatra toradroa eo amin'ireo fitoeram-piara enina eo am-pananganana ao Küçükçekmece. Filoha Uysal [More ...]
Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Istanbul Mevlüt Uysal dia nanome vaovao ho an'ireo mpikambana ao amin'ny mpanao gazety amin'ny alàlan'ny famotopotorana ny fananganana ilay kianja 15 arivo metatra tora-droa izay hampiasaina ho toerana fiantsonana enina eo am-panamboarana ao Küçükçekmece. Filoha Uysal koa [More ...]
Foanana ny tetikasa Sefaköy-Başakşehir Havaray. Ny rafi-pitaterana an-dalamby sy hazavana dia ampiharina fa tsy Havaray. Mevlüt Uysal, Ben'ny tanànan'i Istanbul Metropolitan Mun IM (IMM), nametra-pialana taorian'ny niangavan'ny filoha Tayyip Erdoğan ny fialany. [More ...]
Ny fampiasam-bolan'ny fitaterana, izay hanamaivana ny faharetan'ny fifamoivoizana ary mamela an'i Istanbul ho orona, hitohy amin'ny hafainganam-pandehany. Ilay tanàna mega ao Istanbul dia tsy mbola nahita vahaolana ho an'ny maro [More ...]